पुरुषको लागि कन्डम निशुल्क बनाउदा महिलाको लागि महिनावारी प्याड निशुल्क बनाउनु पर्छ भन्नी कुरा सरकारले गरे हुन्थ्यो कि ? भिडियो – PathivaraOnline
Home > समाचार > पुरुषको लागि कन्डम निशुल्क बनाउदा महिलाको लागि महिनावारी प्याड निशुल्क बनाउनु पर्छ भन्नी कुरा सरकारले गरे हुन्थ्यो कि ? भिडियो
उनको यो माथीको हेडलाइन स्टाटसलाइ १६ हजार भन्दा धेरी दर्शकहरुले शेयर गरी मन पराउनु भएको छ यो लिंकमा हेर्न सक्नु हुन्छ ।
आज फेरी उनको अर्को स्टाटस गतिलो झापड हानेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
”पुरुषको लागि कन्डम निशुल्क बनाउदा , स्कुल , कलेज , र सरकारी कार्यलयमा महिलाको लागि महिनावारी हुदा प्याड निशुल्क बनाउनु पर्छ भन्नी कुरा सरकारले बुझे राम्रो हुन्थ्यो कि ??”
यस बिषय संग संगै गंगा खड्काको यो आवाज पनि हेरी दिनु होला ।
Safe Menstrual National Campaign With Ganga Khadka
मोफसलको पत्रकारितासँगै सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियन्ता गंगा खड्का विगत ६ वर्ष देखि सुरक्षित महिनावारीका विषयमा छात्राहरुलाई जागरण फैलाउदै आउनुभएको छ । गुल्मीदरवार गाउँपालिकाको चारपालास्थित गंगा आधारभूत विद्यालयमा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति !
संसदमा ओलीको सम्बोधनपछि बाबुरामको टिप्पणी- जो चोर उसको ठूलो स्वर!